युगसम्बाद साप्ताहिक - यथार्थ बुझेर पनि नेता किन बहकिएका ? महेश्वर शर्मा
Sunday, 04.05.2020, 08:54pm (GMT+5.5) Home Contact
यथार्थ बुझेर पनि नेता किन बहकिएका ? महेश्वर शर्मा
Wednesday, 08.14.2013, 12:18pm (GMT+5.5)
देश आज अनेकथरि समस्याबाट ग्रस्त छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या गरीबी र रोजगारीको अभावा हो । गरीबीको कारण चाहिं अशिक्षा हो । गरीबी र अशिक्षा यी दुबैको कारण सामाजिक–राजनीतिक अव्यवस्था हो भने त्यसको पनि कारण स्वार्थान्ध राजनीतिक नेतृत्व हो । तर अशिक्षित–गरीब जनतालाई आफ्नो पछौटेपनको वास्तविक कारण भने थाहा छैन । अधिकांश जनता अझै पनि गरीब अथवा धनी हुनु पूर्व जन्मको कमाइ हो भन्ठान्छन् । उनीहरूलाई परम्परदेखि त्यस्तै भनिंदैआएको छ । शोषणको यो परम्परा आजको युगमा पनि नेताहरूले चलाइरहेका छन् । त्यसकारण जनतालाई शिक्षित र सेत बनाउनु राजनीतिकर्मीको पहिलो कर्तव्य हो तर उनीहरू त्यो काम गर्दैनन् । किनभने जनता जान्ने भएमा नेताहरूको ठगी धन्दामा बट्टा लाग्छ । त्यसैले उनीहरू राजनीतिक स्वार्थ हेरेर काम गरिरहेका छन् । त्यो स्वार्थ भनेको चुनावी स्वार्थ हो ।
चाणक्यको भनाइ छ– ‘दुर्बलस्य बलं राजा’ अर्थात् कमजोर जनताको बल राजा हुनुपर्छ । आजका सन्दर्भमा राजा भन्नाले सरकार सम्झनु पर्दछ । लुच्चा, लफंगा, फटाहा, टाठाबाठाले निर्बल जनतालाई दुःख दिन, ठग्न नपाउन् भनेर नै त्यस्ता कमजोरको रक्षा राज्य व्यवस्थाले गर्नुपर्ने भन्ने आशय थियो तर आज सरकारमा भएका सुरे पाँडेहरूले नै दुर्बललाई निचोर्ने र हुनेखाने बाहुबी ठालूहरूकै पक्ष लिएको हुनाले सामान्य दुखी–पीडित जनताले गुहार नपाएको स्थिति छ आज । सरकार चलाउनेहरू नै बलशाली र अपराधीका संरक्षक बन्छन् भने कमजोर जनताले साथ पाउने स्थिति हराइसकेको छ । यहाँ त हिजो आज भाषण जनताका पक्षमा र काम चाहिं हुनेखाने शोषक फटाहाका पक्षमा भैरहेको छ । सरकार मूल समस्यालाई बेवास्ता गर्दै असमर्थप्रति दया देखाए जस्तो गरेर आरक्षण, कोटा जस्ता क्षणिक टालटुले काम गरेर पीडित जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम गर्दैछ ।
यदि यस्तै गरेर जनतालाई अन्धकारमा राख्ने हो भने धनी र गरीबबीचको खाडल बढ्दै गएर सर्वप्रथम नेता, हुनेखाने, धनीमानी भनिएकाहरूलाई नै पिर्नेछ । काम, रोजगारी र खान नपाएपछि समाजमा चोरी, डकैती, लुटपाट, अपहरण, हत्या समेतका अपराध वृद्धि हुँदै जाँदा हुने खानेहरूले नै सुखसंग खान, सुत्न पाउने छैनन् । सामाजिक अव्यवस्थापले कसैलाई पनि बस्न खान दिने छैन । त्यस्ता लक्षण अहिले नै देखिन थालेका छन् । सम्भवतः त्यही डरले हो कि केही बदनाम पूर्व मन्त्री र नेताहरू विहान घुम्दा पनि २।४ गार्डको घेरामा देखिन्छन् । अब पनि सामाजिक विभेद र असमानता हटाउँदै लानेतर्फ काम नगर्ने र बेलैमा गरीबी, अशिक्षा र बेरोजगारी हटाउन सार्थक काम नहुने हो भने समाज नै भ्रष्टाचार र अपराधीकरणको भासमा पर्न बेर लाग्ने छैन । त्यसकारण नेताहरूले राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याएर आजको अव्यवस्था र अराजक स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन कति सार्थक काम गर्न सक्छन्, त्यसैमा भोलिका दिनको स्थिति निर्भर रहनेछ ।
राजतन्त्रले गर्दा देश पछिपरेको भन्नेहरूले गणतन्त्र घोषणा गरेका सात वर्षमा जनतालाई के दिए खै ? राजतन्त्रकालमा आजको जस्तो अराजक स्थिति थियो ? जनताको विचली थियो ? आज त त्यो बेलाकोभन्दा सयौं गुणा भ्रष्टाचार र अनाचार बढेको छ । स्वयं सत्ताधारी नै भ्रष्टाचारका आहालमा पौडी खेलिरहेका छन् । आज गरीबी र बेरोजगारीले गर्दा दैनिक हजारौंको संख्यामा युवाशक्ति कामको खोजीमा विदेशिन वाध्य भएका छन् । मित्र राष्ट्रहरूले अनुदानमा बनाइदिएका कतिपय उद्योग, कलकारखाना गिरिजाले कमिशन खाएर बेचिदिएका थिए भने बाँकी पछिआएकाले पैसाका निम्ति बन्द र हड्ताल गर्दागर्दा बन्द गराए । औद्योगिक क्षेत्रहरूमा आज सिस्नु उम्रेको छ । वास्तवमा देशले उन्नति गर्न नसक्नाको मूल कारण नेताहरूकै दरिद्र मानसिकता हो । यिनीहरूकै स्वार्थले गर्दा देश अधोगतिमा छ । यिनीहरूकै भरपर्ने हो भने नेपाल आज नेपाल आज जुन स्तरमा छ त्योभन्दा निकै तल झर्नु निश्चित छ । जे रोपिन्छ त्यही फल्ने हो । नेताहरू विष रोपेर अमृत खोज्छन् भने कहाँ पाइन्छ ? कुतीतिर लाग्ने, अनि काशी पुगिएन भनेर हुन्छ ? नेताकै बेइमानीले गर्दा देशले धेरै क्षति व्यहोरिसकेको छ । नेताकै भरपर्दा पर्दा ६ दशक सित्तैमा खेर गए । अब त्यसको बेजो उठाउन कस्सिनुपर्छ, नत्र समयले पर्खदैन ।
हाल विवादमा रहेको संघीयताकै कुरा गरौं । यो सानो देश र थोरै जनसंख्यालाई टुक्रा टुक्रा पार्ने हो भने के बाँकी रहन्छ ? आफ्नो देशको भौगोलिक अपस्थिति, मौलिक स्वरुप र ऐतिहासिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राख्ने हो भने हाम्रो आफ्नै प्रकारको विशिष्ठ पहिचान छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको स्वरुप सम्बन्धमा वादविवादमा अल्झिरहनुको औचित्य छैन । निष्पक्ष र निरपेक्ष भएर विचार गरेर पचहत्तर जिल्ला, चौध अञ्चल र पाँच विकास क्षेत्रको विभाजन कुनै व्यक्ति, जाति वा समुदायको नभएर सामूहिक रुपमा राष्ट्रको स्वार्थ र समृद्धिलाई हेरेर वैज्ञानिक रुपबाट भएको छ । आज भने नेताहरू चुनावी स्वार्थमा जनतालाई विचलित पार्न खोजिरहेका छन् संघीयताका नारा उरालेर । यसबाट देशको पछोटेपनलाई नेताहरू अझ लम्ब्याउन खोज्दैछन् । जहाँसम्म जनताको कुरा छ, उनीहरूलाई चाहिएको विना भेदभाव अवसर र अधिकार हो । त्यो कुरा ७५ जिल्ला, १४ अंचल, ५ विकास क्षेत्र, ५८ नगरपालिका र ३९१२ गाविस मार्फत स्वायत्त शासनको अधिकार दिन सकिन्छ भने विवाद झिकेर अझ दुखद् स्थिति किन निम्त्याउने ? जनताले विभाजन होइन, विभेदको अन्त्य र अधिकार खोजेका छन् र त्यो भएकै संरचना मार्फत दिन सकिन्छ भने यसमा के खोट छ र हुँदैन भन्ने ? नदी, हिमाल र राष्ट्रिय विभूतिका नाममा राखिएका अञ्चल, जिल्लाका नाम सबैका सामूहिक पहिचान होइन्न र ? नेताहरूले निरपेक्ष भएर जनतालाई वास्तविकता बुझाउनुपर्छ नत्र केको नेता ? यहाँ त उल्टै जनतालाई फुटाउने कुचेष्टा पो गरिहेका छन् । योभन्दा पीडादायक स्थिति अरु के हुन्छ ? वास्तविकता बुझेर पनि नेताहरू किन बहकिएका हुन् ? कुन स्वार्थले बहकाएको हो ? यसका पछाडि के बाध्यता छ ? किन शत्रु हँसाउने काम हुँदैछ ? जनताले पनि थाहा पाउनुपर्याे नि ?
केन्द्रको नियन्त्रण नहोस् भनेर संघ खोजिएको हो भने पनि पाँच विकास क्षेत्रलाई संघ मानेर अधिकार विकेन्द्रित गरे त भैहाल्छ नि । राज्य व्यवस्था संचालन गर्न आवश्यक नियन्त्रणात्मक अनुशासन त जहाँ पनि चाहिन्छ, नत्र त आजकै जस्तो अराजक स्थिति हुन्छ । इमानदारीका साथ सुशासनका निम्ति काम गर्ने स्वच्छ मनसाय हो भने भएकै संस्था पर्याप्त छन् । दलहरू आपसी विग्रहमा अल्झिँदा केन्द्रको आवश्यक निगराजी र नियन्त्रण चाहिन्छ भनेर नै प्रान्तीय सरकारहरूले केन्द्रको स्वीकृति वेगर गर्न नसक्ने भनी केही प्रावधान राखिएका हुन्छन् । धेरै टुक्रे राज्यहरू बनेको अवस्थामा साधन स्रोतको कमी भएर कमजोर हुन जाँदा कि त केन्द्रले नै धान्नुपर्ने हुन्छ, कि त कतै विलीन हुने स्थिति आउन सक्छ, इत्यादि धेरै कुरामा विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ, अर्काको देखासिकी वा नक्कल गर्न खोजेर पार लाग्दैन भन्ने पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । सपारे सप्रने र विगारे विग्रने कुरा हाम्रै हातमा छ । बेला छँदै बुद्धि, विवेक पुर्याएर काम गर्ने सोचाइ राखौं । सबैको जय हुने काम गरौं ।
संधै सबैलाई झुक्याउन सकिने छैन - तारा सुवेदी (07.30.2013)
जलवायु परिवर्तनबाट बच्न मोर्चाबन्दी आवश्यक - यादब देवकोटा (07.24.2013)
प्रजातान्त्रिक तत्वबिनाको रित्तो गणतन्त्र - महेश्वर शर्मा (07.24.2013)
अख्तियारवालाको ध्यानाकर्षणका लागि - तारा सुवेदी (07.24.2013)
राष्ट्रिय निर्णयको अधिकार मुलुक बाहिर - यादब देवकोटा (07.17.2013)
गणतन्त्रको नाम : हरिबिजोकको स्थिति - महेश्वर शर्मा (07.17.2013)
“अख्तियार” वालाको ध्यानाकर्षणका लागि (२) - तारा सुवेदी (07.17.2013)
खै आफ्नो दायित्व सम्झेर कर्म गरेको ? यादब देवकोटा (07.09.2013)
बेकाइदा र बेथितिको पराकाष्ठा - महेश्वर शर्मा (07.09.2013)
“अख्तियार” वालाको ध्यानाकर्षणका लागि (१) तारा सुवेदी (07.09.2013)
मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासको आधार : जनअपेक्षित विकास योजना - यादब देवकोटा (07.05.2013)
समस्याको मूल जरो मनको प्रदूषण -महेश्वर शर्मा (07.05.2013)
सिक्किमीकरणको गज्याङ् गुजुङ प्रक्रिया - तारा सुवेदी (07.05.2013)
शैक्षिक गुणस्तरमा निरन्तर ह्रास : युवाहरूलाई विदेशप्रति आकर्षित गर्ने मेसो - यादब देवकोटा (06.26.2013)
जनताको नाम लिएर जनताकै ढाड भाँच्नेहरू - महेश्वर शर्मा (06.26.2013)